गिनिज बुक त हामीले गरेको कामले आधा भरिन्छ-केपी ओली - Sankalpa Khabar
काठमाण्डाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वडा आत्मविश्वासले भरिपूर्ण भाषण गरेका छन । वागमती प्रदेश कमिटीलाई सम्वोधन गर्दै उनले यो देश नेकपा एमाले वाहेक अरुले वनाउनै नसक्ने दावी गरेका छन । उनले यो देश बनाउने हुति अरु नेता र दलमा नरहेको बताएका छन । उनले एमालेले चार बर्ष सरकार चलाउदा गरेको कामको रेकर्ड राख्ने हो भने गिनिज वुकको आधा किताव भरिने दावी गरेका छन । उनले भने–हामी रेकर्ड राख्ने दौडदैनौं अलग कुरा हो,तर राख्न खोज्ने हो भने हामीले गरेको कामले गिनिज वुक भरिन्छ ।
उनले सरकारबाट प्रतिपक्षमा एमाले आएको भनेको हारेको होइन भनेका छन । उनले वल गरेर एमालेलाइ वाहिर राखेर झन ठूलो अवसर दिएको बताएका छन । उनले कांग्रेसकै नेताले एमालेको सरकार राम्रो भएको बताएको सभामा बताए । सारा दुनिया लागेर एमालेको सरकार ढालेको वताए । उनले यो सरकार अहिले पनि हिम्मत गरेर ढाल्ने हो भने एक हप्तामा ढालिदिने बताए ।
उनले सभामा यसो भनेका छन–यो एमाले हो क्या । दुई पटक किडनी फेरेको प्रधानमन्त्री कहाँ छ ? २ सय दस वटा वाटो हामीले एकै दिन शिलान्यास गरयौं । यो विश्व इतिहासमा छैन । नेपालले मात्र यस्तो गर्छ । र,एमाले भयो भने मात्र गर्छ । काम गर्न त हुति चाहिन्छ । जसले पनि गर्न सक्ने भए एमाले किन चाहियो ? हेल्थ पोष्ट हेर्नुस कति बनायौं । स्कुल हेर्नुस कस्तो वनायौं ।
शिशिर योगीले एकदिन गीत गाए–यो देशमा म एउटा मान्छे म खोजिरहेको छु । आज म तपाइलाई यो देश वनाउने मान्छे म तपाइलाई चिनाइदिन्छौं । यो देश हामीले बनाउछौं । हामी भनेको एमाले । यो आत्मविश्वास वोकेर हिडनुपर्छ । नत्र के काम भयो राजनीति गर्नुको ।
८ मंसिर ११:१८
सर्वोच्चमा आज पनि तनाव, कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धकेलाधकेल
५ मंसिर ११:५८
५ मंसिर १५:५९
हत्या गरिएका वृद्धको शव ल्याइयो राजविराज
९ मंसिर ०९:३२
९ मंसिर ०९:३७
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट…